Libya oo dib u dhigtay doorashooyinka bisha soo socoto – SBC
Libya oo dib u dhigtay doorashooyinka bisha soo socoto
Posted by Webmaster on Juun 12, 2012 Comments
Tripoli:- Gudoomiyaha guddiga doorashooyinkaLibya ninka lagu magacaabo Nuuri Al-cibaari oo shir jaraa’id ku qabtay magaaladaTripoli ayaa sheegay in doorashooyinka ee la filayey in ay qabsoomaan 19 June si loo doorto xubnaha barlamanka dalkalibya dib loo dhigay 7 july sababo farsamo awgeed.
Maalmahan ayaa waxaa soo kordhay shakiga laga qabo qabsoomidda doorashooyinka bishan June.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in go’aanka dib loogu dhigay doorashooyinka ay sabab u tahay dib u dhaca ku yimid qawaaniinta lagu kala maareen lahaa howlaha doorashooyinka iyo kordhin lagu sameenayo waqtiga is-diiwaangelintga codbixiyaasha.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in guddigan la doortay 12 febaraayo ee la soo dhaafay islamarkaana waqtiga la siiyey uu yahay 120 maalmood taasi oo ah waqti gaaban gaar ahaan wadan aanan kadhicin doorashooyin mud onus qarni ah.
Al-cibaari waxa uu carabaabay in uu ka helay warqad golaha qaranka KMG si uu u cadeeyo go’aanka uu dib ugu dhigay doorashooyinka.
Qoraal ka soo baxay golaha qaranka KMG ee haya talada dalka Libya ayaa lagu sheegay in 19 bisha June laqaban doono doorashooyinka taasi oo kadambeysay 240 maalmood kadib markii lagu dhawaaqay in Libya laga xoreeyey nidaamkii Mucammar Al-qadaafi.
Ustaad C.xakiim Maxamed Cumar